Goorma ayaynu ku qori karnaa dayaxa, qorraxda iyo dhulka xarfaha waaweyn? | Saadaasha Shabakadda
Mararka qaarkood waxbaan ka qoreynaa qorraxda, dhulka iyo dayaxa, waxayna kuxirantahay macnaha guud ee aan sameyneyno, waa inaan adeegsano xaraf weyn ama maya. Waxaa jira waqtiyo ay macallimiintu tixgeliyaan qalad khaldan kuwa kalena aysan tixgelin.
Goorma ayaynu u adeegsaneynaa xarafka weyn si aan u tixraacno canaasiirtan iyo waayo?
1 Qorraxda, dhulka iyo dayaxa
2 Xaaladaha kale ee aan cilmiga xiddigiska ahayn
Qorraxda, dhulka iyo dayaxa
Xaaladaha xiddigiska, waa in dayaxa loo weyneeyaa sida qorraxda ama dhulka oo kale, Maaddaama aan tixraacno walxahan sida magacyada loo yaqaan 'walxaha'. Si kastaba ha noqotee, waxaan qormooyinkan ku qoreynaa wax yar, markaan tixraacno xiddigaha laftooda ama adeegsiga wax soosaarka ama sarbeebta ah.
Waxaa jira xaalado aysan u baahnayn in laga faa'iideysto. Tusaale ahaan, weedha ah "Waxaan aadayaa xeebta si aan qorax ugu soo baxo," muhiim maahan in erayga "qorrax" la weyneeyo maaddaama aynaan qorraxda u bixinayn magac magac u yaal ah. Si kastaba ha noqotee, weedha ah "meerayaasha waxay ku meeraystaan ​​qorraxda", waxaa lagama maarmaan ah in la weyneeyo, maadaama aan ugu yeerno qorraxda magac ahaan.
Xaaladaha kale ee aan cilmiga xiddigiska ahayn
Ka baxsan astaamaha cilmiga xiddigiska, adeegsiga tooska ah iyo kuwa ka dhasha ama kuwa sarbeebta ah, waxay ku qoran yihiin xarfaha ugu horreeya ee caadiga oo dhan. Taladan waxay khusaysaa gaar ahaan muujinta sida qorrax qorrax, qorrax soo bax, noqo qorrax, dayax buuxa, dayax cusub, iftiinka dayaxa, bisha malab, dalbo dayaxa, dhulka oo laga takhalusay iyo kuwa kale oo la mid ah, halkaas oo aan lahayn wax muhiim ah sida xigashooyinka xigashada ama farta qoraalka loo baahdo. Ground waxaa had iyo jeer lagu qoraa xuruuf yar markay tixraacayso dhulka: "Diyaaraddu way soo caga dhigan kartaa."
Gabagabadii waxaan dhihi karnaa marka loo eego falanqaynta cilmiga xiddigiska, Qorraxda, Dhulka iyo Dayaxa waa la weyneeyay maxaa yeelay waxaad moodaa inay magacyadooda ahaayeen. Waxay u egtahay inaad magacaaga ku shubayso shandad yar. Sidan oo kale, qalad kuma yeeli doonno mar kale markaan qoraynayno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Goorma ayaynu ku qori karnaa dayaxa, qorraxda iyo dhulka xarfaha waaweyn?